> Resource > Free > Top 5 Free Office Software
Ma waxaad doonaysaa Microsoft Office kale, kuwaas oo Free Office hadda Software? Ka sokow Microsoft Office, waxaa jira adeegyo badan oo online oo shidmaan xafiiska desktop waxaad isku dayi kartaa. In this article, waxaana dooneynaa in aan soo saarno 5 adeegyada xafiiska free caanka ah, ayaa rajeynaya in aad mid aad u baahan tahay ka heli karto.
Dad badan ayaa isticmaalo Google Docs sida meesha ay ku kaydiso files ay elektaroonik ah, sida shahaado dhalasho, baasaboor, shahaadada degree, invoice, iwm Si kastaba ha ahaatee, aad wax dheeraad ah la Google Docs samayn karaa. Google Docs waa Suite xafiiska online, kaas oo awood kuu si ay u abuuraan Google DoCS, bandhig, barasantigareeyaan, foomamka, waxa ay barbaro galeen, miisaska, iwm Waxaa ka xoog badan Microsoft Office, maxaa yeelay, waxay bixisaa arrimo badan, qiimeynta tababarka, qorsheeye miisaaniyadda qoyska, mashruuc jadwalka maamulka, 2011 kalandarka bil kasta, biilka adeeg, iwm, kaliya wax walba oo loo isticmaalo in xafiiska iyo guriga. Oo weliba, waxa aad u saamaxaaya in ay dadka aad rabto in aad online wadaagaan faylasha.
Sida Google Docs, OpenOffice waa il Suite xafiiska furan wax ku qorista, bandhigyo, barasantigareeyaan, database, iyo muuqaallo kale. In kastoo Open Office ma aha sida caanka ah sida Google Docs, waa ka duwan labaad ee ugu caansan il furan xafiiska. Waxa ay maamushaa soo tebiyaan badan, Windows, Mac OS X, Linux, iwm iyo taageertaa luqadaha badan
Zoho waa adeeg online u fiican, Suite bixiya xafiiska, oo ay ku jirto ku qorista, barasantigareeyaan, bandhigyo, database, la soco-qaadashada, maamulka mashruuca, qaansheegta, iwm ma aha gebi ahaanba bilaash ah. Dadka waa lacag la'aan. Wixii ururada aan faa'iido doon ahayn, waxa jaban ah iyo ganacsiga, waxaa soo eedeeyo.
Si aad u noqoto qof daacad ah, goffice ma u fiican yahay sida Google Docs iyo Open Office. Waxay bixisaa adeegyo online wax ku qorista, kaas oo awood kuu si ay u abuuraan aad content halkan iyo file ee PDF, Word ama qaabab Image. In kastoo ay kaliya ayaa bixiya ee processing hadalka aasaasiga ah, waa u fududahay in la isticmaalo.
NeoOffice waxaa caadi ahaan loogu talagalay in ay sii wadaan in X. Mac OS Waxaa markii hore loogu talo galay in 2003, marka ma jirin Open Office for Mac heli karo. Oo marar badan waxaa la casriyeeyay. Waa maxay ka badan, hadda waxa uu leeyahay qaar ka mid ah muuqaalada socodyada oo aad marna heli karo in Suite kale xafiiska. Tusaale ahaan, waxyiga Qaybaha ee Mac OS X 10.7 Libaaxa, ayaa laga yaabaa NeoOffice si toos ah iyadoo sii nuqul ka mid ah dukumeentiga ka hor inta wax isbedel ah la badbaadiyey. By xulashada NeoOffice cusub ee Browse Dhamaan Qaybaha menu, users waa in la soo celiyo mid ka mid ah nuquladii hore ee dokumentiga ee Apple ayaa version document browser awoodaan.